Kroazada fahenina - Wikipedia
I Gregôrio IX
Ny kroazada fahenina, izay nanomboka tamin' ny taona 1228 sy niafara tamin' ny taona 1229 dia nokarakarain' ny emperora rômana jermanika Friedrich II (frantsay: Frédéric II) mba hamerenana indray ireo tanin' ny Fanjakan' i Jerosalema izay votsotra hatramin' ny fakan-tany nataon' i Saladin sy ny renivohiny. Fahombiazana tsy maharitra no azon' izany kroazada izany, nefa tratran' ilay emperora (izay naongan' ny papa tsy ho isan' ny fiangonana) ny tanjony rehetra tamin' ny alalan' ny diplômasia fa tsy tamin' ny alalan' ny ady. Nanafintohina ny tontolo kristiana izany fomban' ny emperora izany.
Ny kroazada fahenina dia notarihin' ny emperora Friedrich II izay, hatramin' ny taona 1215, nivoady ny hitarika ny fanafihan' ny kroazada. Nohavaoziny teo anatrehan’ ny papa izany fampanantenany izany tamin' ny taona 1220 nefa noho ny antony ara-pôlitika anatiny dia nihemotra ny fiaingany. Tsy nisy vokany ny fandrahonana fanonganana nataon’ ny papa Gregôrio IX (Gregoara IX). Tezitra noho izany fahatarana izany ny papa ka nanatanteraka ny fanonganany ny emperora tamin' ny taona 1227.
Niainga an-tsambo nankany amin' ny Tany Masina tamin' ny volana Jona 1228 ka nanatona ny ampahany be amin' ny tafika nalefany tany Saint-Jean d’Acre izy. Nanao izay hahazoany an’ i Jerosalema izy tamin’ ny nanaovany fifampiraharahana tamin' ny soltàna ejipsiana Al-Kamil. Izany fifampiraharahana izany dia niteraka fifanaraham-pandriam-pahalemana izay nosoniavina tao Jaffa tamin' ny taona 1229, izay nahatonga ny Ejipsiana namerina an' i Betlehema sy i Nazareta sy i Silon ary i Jerosalema tamin' ny Kristiana sady namela malalaka ny lalana mankany amin' ireo tanàna masina. Izany fifanarahana izany, izay nohajaina nandritra ny folo taona, dia tsy nankasitrahan' ny fiangonana kristiana manontolo izay tsy mampitovy ny kroazada amin' ny fifampiraharahana ara-diplômasia.
Ny fahombiazana ara-diplômasia azon' i Frédéric II dia nohamafisin' ny kroazada nampanaovin' i Gregôrio IX nanomboka tamin' ny taona 1237. Izany kroazadan' ny mpanan-karena izany (frantsay: "Croisade des barons") dia nahafahana namerina amin' ny Kristiana ny ampahany be amin' ny Fanjakan' i Jerosalema (1239-1241) tamin' ny alalan' ny fifampiraharahana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kroazada_fahenina&oldid=1002064"
Voaova farany tamin'ny 8 Martsa 2021 amin'ny 09:18 ity pejy ity.